आलिया भट्टकी आमा किन पाकिस्तान नै जान चाहन्छिन् ? हिन्दुराष्ट्रको विपक्षमा...
आलिया भट्टकी आमा किन पाकिस्तान नै जान चाहन्छिन् ? हिन्दुराष्ट्रको विपक्षमा…
चैत २२, २०७५ BN
नयाँदिल्ली : बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टकी आमा सोनी राजदान पाकिस्तान जान चाहेको भन्दै त्यहाँ आफू खुसी रहने बताएकी छन् ।
सोनीले भनेकी छन् ‘म पाकिस्तान जान चाहन्छु । त्यहाँ नै मखुसी हुन्छु ।’ उनको यस्तो प्रतिक्रिया सामाजिक संजालमा भाइरल नै बनेको छ । जब कि, ६२ वर्षे अभिनेत्री सोनी अचेल फिल्म ‘नो भादर्स इन कश्मीर’ को प्रमोशनमा व्यस्त छिन् । एक अन्तरवार्तामा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । आजको अन्नपूर्णपोष्टमा समाचार छ ।
सोनीको अभिव्यक्ति यस्तो छ :
जब म यस्तो कुरा गर्छु कि, मान्छेहरु मलाई देशद्रोही भनेर पाकिस्तान पठाउन सुरु गरिदिन्छन् । कहिलेकाहीँ म सोच्छु कि, हो म पाकिस्तान नै जान चाहन्छु । म पाकिस्तान गएर औधी खुसी हुन्छु । त्यहाँको खाना पनि मीठो हुन्छ । यहाँ त मान्छेहरु मलाई लखेट्छन् । धेरै पटक मलाई मान्छेहरुले पाकिस्तान जाऊ भनेका छन् । तर मेरै जस्तो सोच राख्ने मान्छेहरु धेरै छन् यहाँ । यसैले पनि मलाई खासै फरक पर्दैन कि, कसले के भन्छ भनेर ।’
जब सोनीलाई पाकिस्तानमा के कुराले खुसी बनाउँछ भनेर सोध्दा उनले भनिन्, ‘म फेरि पनि ट्रोल बन्नेवाला छु । म उहाँको खाना खान्छु र फर्किन्छु । बस्ने छैन । छुट्टी मनाउन जान्छु । त्यो पनि आफ्नै मर्जीले ।
भारत हिन्दु देश बन्नेविरुद्ध सोनी
अभिनेत्री सोनीले अन्तरवार्तामा भारतको पूरा क्षेत्र हिन्दु बन्ने कुरामा आपत्ति जनाएकी छन् । यहाँ विभिन्न संस्कृति मिलेर नै विशाल देश बनेको तर्क गर्दै उनले हिन्दुराष्ट्र बन्ने कुराको विरोध गरेकी हुन् ।
जब कि, पाकिस्तानमा यस्तो केही नभएको उनले बताइन् । यसैले पनि पाकिस्तान आजसम्म विशाल देश बन्न सकेको उनको भनाइ थियो । आश्विन कुमारको निर्देशनमा बनेको ‘नो फादर्श इन कश्मीर’ ५ अप्रिलमा सिनेमाहलमा सार्वजनिक हुँदै छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, चैत २२, २०७५०२:४६
यसरी बाहिरिएको थियो एसईई प्रश्नपत्र, अनुसन्धानबाट खुल्यो रहस्य